Na-atụgharị uche taa n'ụzọ ọ bụla nke nwere nnukwu ebumnuche ịtụkwasị obi na Jizọs
Pita zara ya: "Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ gị, nye m iwu ka m bịakwute gị na mmiri." Ọ sịrị, "Ngwanụ." Matiu 14: 28-29a
Lee ngosipụta okwukwe nke ahụ bụ! St. Peter, onye ejidere na ọnọdụ oke osimiri dị n'oké osimiri, gosipụtara obi ike ya zuru oke na ọ bụrụ na Jizọs kpọrọ ya pụọ ​​n'ụgbọ mmiri gaa ije n'elu mmiri, ọ ga-eme. Jizọs kpọrọ ya onwe ya na St. Peter malitere ije ije n’elu mmiri. N’ezie anyị maara ihe mechara mee. Pita tụrụ egwu ma malite imikpu. Ọ dabara nke ọma, Jizọs were ya, ihe niile gara nke ọma.
Ọ dị mma ịmara, akụkọ a na-ekpughere anyị ọtụtụ ihe banyere ndụ okwukwe anyị na ọtụtụ ihe banyere ịdị mma nke Jizọs, yabụ, anyị na-amalitekarị site na okwukwe na isi anyị ma nwee ebumnuche ibi ndụ okwukwe ahụ. Dị ka Pita, anyị na-ekpebisi ike mgbe niile ịtụkwasị Jizọs obi na 'ije ije n'elu mmiri' site n'iwu ya. Agbanyeghị, ọtụtụ mgbe anyị na-ahụ otu ihe ahụ Pita mere. Anyị na-amalite ibi ndụ ntụkwasị obi anyị gosipụtara n’ebe Jizọs nọ, naanị na ịla azụ na mberede na inye egwu n’etiti nsogbu anyị. Anyị na-amalite ịmịcha ala ma anyị kwesịrị ịrịọ maka enyemaka.
N'ụzọ, ọ ga - abụ ihe kachasị mma ma ọ bụrụ na Pita gosipụtara okwukwe ya na Jizọs wee bịakwute ya n'atụghị ụjọ. Ma, n’ụzọ ndị ọzọ, nke a bụ akụkọ kachasị mma ka ọ na-ekpughe ịdị omimi nke obi ebere na ọmịiko nke Jizọs, na-ekpughe na Jizọs ga-ewepụ anyị pụọ na obi abụọ na ụjọ anyị mgbe okwukwe anyị ga-aga. Akụkọ a kariri ọmịiko Jizọs na oke enyemaka Ya karịa enweghị okwukwe Pita.
Ntughari, ta, n'uzo obula nke nwere ezi ebumnuche ịtukwasi obi na Jisos, ibido na uzo a wee daa. Mara na Jizọs nwere obi ebere, ọ ga-eso gị n’adịghị ike gị dịka o soro Peter. Kwe ka o jide aka gi ma mee ka ihunanya ya sie ike.
Nna m ukwu, ekwere m. Nyere m aka mgbe m na-egbu oge. Nyere m aka ịbịakwute gị oge niile mgbe oké ifufe na nsogbu nke ndụ dị ka ọ karịrị akarị. Enwere m ntụkwasị obi na, n’oge ndị ahụ karịa oge ọ bụla, ị nọ ebe ahụ iru aka amara gị. Jesus m kwere na gị
← Na post gara aga Gara aga post:Ezigbo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, unu niile na-akparịta ụka ma pụọ ​​iche "maka ndị kwere nkwa"
Ọzọ Post → Post ozo:Ezi ofufe nke ụbọchị: otu esi adị ndụ elekere mbụ nke ụbọchị